नेपाली भूमि उडाउनेहरू नै आज भूमि फिर्ता ल्याउँछु भनिरहेका छन् : राजेन्द्र महतो - Primekhabar.com
अन्तर्वार्ता देश बैनर न्युज विचार
९ आश्विन २०७७, शुक्रबार प्राइम खबर डेस्क	0 Comments
संविधान देशको मूल कानुन हो । तर नेपालमा संविधानलाई मजाकका रूपमा बनाइएको र मजाकका रूपमा लिइएको छ । संविधानलाई जनताको आशाको केन्द्र बनाउने काम अहिलेसम्म भएन । नेपालमा ६ वटा संविधान समाप्त भइसके । यो सातौँ संविधान पनि कुन दिन सकिने हो ठेगान छैन ।
– यसको मूल कारण भनेको नेपालमा संविधान मात्र फेर्ने काम भइरहेको छ, विचार र व्यवहार फेरिएको छैन । विचार र व्यवहार नफेरेपछि जति संविधान बनाए पनि के हुने हो र ? जति व्यवस्था फेरे पनि के हुने हो र ? जनताले केही पाउने होइनन् । यो अवस्थामा संविधानको विरोध हुनु स्वाभाविक नै हो ।
साढे दुई वर्ष खेर गयो ? आज सबै जनता असन्तुष्ट छन् । सरकार काण्डै काण्डैले भरिएको छ । कोरोना महामारीमा पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त भए । प्रधानमन्त्रीले ‘भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न, आफू पनि गर्दिनँ’ भन्नुहुन्छ । यहाँ गर्न पनि दिने आफू पनि गर्ने उल्टो भइरहेको छ । यो सरकार उखान र टुक्कामै चलिरहेको छ ।
← काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै ६४५ कोरोना संक्रमित थपिए
शनिबार थपिए १ हजार २०७ नयाँ संक्रमित →
नेपालमा शुक्रबार थपिए ८३८ जना कोरोना संक्रमित
माधव नेपालका ७ सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण, परिवार सबैको नेगेटिभ